Warshadaha Qolka Shawaasha Badbaado ee Shiinaha iyo soosaarayaasha | Yongyu
Muraayadda qubayska casriga ah ee heerkulka leh: Xakamaynta sirtaada si fudud
Wixii hadda ka dambeeya, waxa kaliya ay qaadataa waa fidaad isbeddelka si looga dhigo albaabada qubeyskaaga daahsoon. Tikniyoolajiyadda casriga ee smart ayaa lagu dhex daray badeecadeena si ay kaaga caawiso inaad muuqaalkooda u beddesho baahida. Haddii aad rabto inaad ka dhuumato indhaha foorjeerka ama aad iftiin dheeraad ah gasho, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad riixdo batoonkaas. Muraayadayada qabow ee darbiyada iyo albaabada qubayska, asturnaantaada had iyo jeer waa la ilaaliyaa!
Mawaxaad raadineysaa muraayad si aad ugu dhameystirto astaamahaaga gudaha? Kadibna ku qab halkan. Waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan ku siinno dhalo kuleylka qabow leh xulashooyinka dhalaalaya ee la doonayo. Ma waxaad u rabtaa qaab gaar ah? Anaguna tan tan waan kuu samayn karnaa.
Codsiyada kale ee dhalada kulul ee dhalaalaya
Muuqaalka kale ee xusid mudan ee tikniyoolajiyadan caqliga lihi waxay tahay iyada oo aan xad u lahayn sida loo adeegsan karo. Waxaad u tagi kartaa ikhtiyaar aan xakameyn karin PDLC albaabka qubeyska muraayadda qabow ama SPD mid daaqadaha, istuudiyaha, iwm. Si ka duwan dhiggeeda, kan dambe wuxuu sameeyaa saameyn hadhsan, kana horjoogsanaya iftiinka inuu soo galo. Taasi waa sababtaas. waxaa lagu kalsoonaan karaa in loo isticmaalo qorraxda marka qorraxdu aysan rabin.
Si kastaba ha noqotee, alaabooyinka muraayadaha badbaadada uguyareeya ee halkan ayaa halkan yaalla!
Ku soo dhowow inaad na soo wacdo @ 0086-400-089-8280
Hore: Warshadda qiimihiisu hooseeyo 900mm Shower Door 8mm Glass - Muraayada Qolka Badbaada Qolka - Yongyu
Xiga: Muraayada Jiilaalka / Jiilaalka ee Qaboojiyaha Qolka Shoolka
Albaabada Qolka Quwada Gambarka Musqusha